Archive du 20201015
Mpanolotsaina manohitra ny tsy rariny ‘’Tsy ekenay ny famarotana an’Antananarivo”
Lavinay 3 mianadahy izay mijoro eto ny famarotana an’Antananarivo, hoy ireo isan’ny mpanolotsaina mpanohitra eo anivon’ny kaominin’Antananarivo renivohitra avy amin’ny vondrona politika Komba sy IRK tetsy amin’ny restaurant Tsiky Ambohijatovo omaly.
Fankalazana ny 14 oktobra tao Mandritsara Nolokoina volamena ny sary vongan’ny filoha Tsiranana
Hetsika maromaro omaly no nankalazana ny fetin’ny repoblika voalohany tao Mandritsara niarahana tamin’ny antoko politika naorin’ny filoham-pirenena tamin’izany, Itompokolahy Philibert Tsiranana, dia ny PSD.
Ny Hasina Andriamanjato “Olam-panjakana no mila vahana eto ”
Natao hoe repoblika ny anaran’ny fanjakana izay natsangatsika, hoy ny minisitra teo aloha, Ny Hasina Andriamanjato, naneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena indray, indrindra, ny resaka fankalazana ny 14 oktobra sy ny fifidianana loholona hoavy.
Fitsarana an’i Rolly Mercia Andrasana anio ny didy
Niakatra fitsarana omaly 14 oktobra ny Minisitry ny serasera teo aloha Atoa Harry Laurent Rahajason na Rolly Mercia, niaraka tamin’ireo olona 4 enjehina miaraka aminy.
Jean Eric Rakotoarisoa « Tsy mora ny mametraka fitsinjaram-pahefana »
Be no miteny fa ny lehiben’ny faritra sy ny faritra tokony hatao ny fifidianana. Ny faritra efa tamin’ny Repoblika fahatelo, ny mpitondra rehetra nifanesy teo tsy nisy nametraka,
Antoko mitaky ireo nosy Malagasy Ho avy eny Tsimbazaza indray anio
Ny 14 oktobra 1958 no nilazana ny nitsanganan’ny repoblikan’i Madagasikara, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika Otrikafo, Elia Rabevahiny.
Fetin’ny 14 oktobra Tsotsotra ny hetsika tany Antsohihy
Notanterahina tao Anahidrano tany Antsohihy omaly 14 oktobra ny fanamarihana ny faha 62 taona nijoroan'ny Repoblikan’i Madagasikara.
Demokrasia sy Repoblika “Mila fanabeazana ny vahoaka sy ny mpitondra”
“Tsy tokony ho sakana amin` ny soatoavina Malagasy ny fametrahana rafitra repoblikanina eto Madagasikara.
Drafitry ny fampihavanana Ho samihafa ny fampiharana isam-paritra
Ao anatin’ny savaranonandon’ny lalampanorenana Malagasy sy ny andininy faha 168 ny fametrahana ny fampihavanam-pirenena eto Madagasikara, hoy ny filohan’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy (CFM)
Jeneraly Ramakavelo “Aza manonofy fahaleovantena raha mbola…”
Ny 14 oktobra 1958 ny filazana tamin’i Fomba ofisialy, fa Madagasikara dia miala tsy ho zanantany Frantsay fa miditra ho Repoblika ao anaty Firaisam-be Frantsay.
Raharaham-pirenena Maro ireo zavatra tsy fantatry ny vahoaka
Hita izao fa manao letrezana ny fitondrana hanatanterahana ny fifidianana loholona amin’ny desambra, hoy ny depiote Alain Ratsimbazafy
Ranesa Firiana “Rariny raha vitsivitsy ny kandida”
Vitsy ny antoko politika miroso amin’ny fandraisana anjara amin’ny fifidianana amin’ny alalan’ny fametrahana taratasy filatsahan-kofidiana, hoy ny mpahay lalana, Ranesa Firiana, raha naneho ny fahitan’ny fahavitsian’ny dosien’ireo mpilatsaka ho loholona hatreto.
Sakoroka tao amin’ny “bar” Matin’ireo mpirevy ilay zandary nandamina
Zandary iray manana galona “Adjudant chef” miasa ao amin'ny Vondron-tobim-pileovana Vakinankaratra no namoy ny ainy vokatry ny ratra sy vono nahazo azy ny alin'ny talata 13 oktobra 2020.
E-Ariary Manao antso tolo-biby ny Banky Foibe
Ho fiantohana ny fiandrianan` ny vola ariary sy hanatratrarana ny tanjona apetraka amin`ny fampidirana vola no antom-piasian` ny tetikasa e-Ariary.
Taom-pianarana 2020-2021 Oktobra hatramin’ny jolay
Raha miditra anio alakamisy 15 oktobra ireo mpampianatra eny anivon’ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny Nosy dia ny 26 Oktobra ho avy izao
Ministeran’ny fampianarana teknika Hijery manokana ireo tsy mianatra kanefa manana traikefa
Hijery manokana ireo olona tsy dia afaka firy tamin’ny fianarana nefa manana traikefa sy efa niasa ny Ministeran’ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa.
Fanafihana teny Avaratr’Antanimora Nalefa eny Tsiafahy avokoa ireo jiolahy tratra
Lehilahy miisa 02 no nosamborin’ny polisy miasa ao amin’ny BC4 Anosy . Ny iray tany Toamasina tamin’ny 08 oktobra teo raha teny Ankorondrano ny iray tamin’ny 10 oktobra.
Fitandroana ny filaminana Hanatsara ny fomba fiasa ny aoToliara
Manomboka mihetsiketsika avokoa ireo kaominina an-tanan-dehibe amin` ny fanamafisana ny ady amin` ny tsy fandriampahalemana.
Jiolahy tsy mety fay Vao nivoaka ny fonja dia tratra nanendaka indray
Tovolahy iray 24 taona no nosamborin’ny polisy SAG eny Anosy ny alatsinainy teo. Raha araka ny fantatra dia nanendaka tovovavy iray handeha hividy fitaovam-pianarana izy io ny 10 oktobra lasa teo teny amin’ny pavillon Analakely.